Antanimena, Mamory Ivato… : mirongatra ny fanafihana mitam-basy amin’ny épicerie | NewsMada
Antanimena, Mamory Ivato… : mirongatra ny fanafihana mitam-basy amin’ny épicerie
Omaly tokony ho tamin’ny 10 ora sy 15 minitra maraina, notafihana telo lahy nitondra basy P.A iray avy ny toeram-pivarotana iray, teny Antanimena tsy lavitra ny foiben’ny HVM. Voaroba tamin’izany ny vola tamin’ny baoritra tao an-tsena sy ny firavak’ireo mpivarotra. Norobain’ny jiolahy ihany ny vehivavy iray nisakafo tao, ka lasa ny finday niaraka tamin’ny poketra. Araka ny fitantaran’ireo mpivarota, telo lahy ireo olon-dratsy niditra tao an-tsena. “Niditra avy any ivelany nanao be fiavy izy ireo, ka ny roa nijoro nanambana basy teo anoloan’ny “vitrine”, ny iray namonjy anay taty anatiny. Nitazona basy P.A iray avy ireo olona ireo ary nanambana anay sy izay teo amin’ny manodidina”, hoy rangahy mpivarotra.
Tsy nisaron-tava izy ireo fa nanao “bonet” avokoa. “Ny iray lava fa ny roa lahy somary kelikely fohifohy”, hoy ny fanazavana.
Nikasa hitifitra ireo jiolahy saingy latsaka ny bala iray ka tsy nipoaka ny basy. Tavela teo ilay bala rehefa nitsoaka ireo mpanafika. Nisy nampandre ny polisy ihany ireo olona teny ivelany nahatazana ireo jiolahy ary vetivety ireo dia tonga teny. Tsy tratra anefa ireo fa ny polisy nitontona ireo olon-dratsy nitsoaka niditra elakelantrao tany amin’ny Malacam. Nanao savahao sy nanara-dia ny polisy saingy tsy hita izay nanjavonan’ny jiolahy.
Nentin’ny BC Anosy ilay bala nanaovana fanadihadiana. Nametraka fitoriana kosa ny mpivarotra.
Nipoaka ny basy teny Ivato
Nitrangana fanafihana ihany teny Mamory Ivato omaly hariva. Lasan’ny jiolahy ny 10 tapitrisa Ar sy ny finday tamina toeram-pivarotana iray. Nipoapoaka ny basy teny an-toerana. Voalaza fa telo lahy no niditra tao amin’ilay trano fivarotana, nividy rano. Nambanan’izy ireo basy P.A ny tompon’ilay fivarotana ary niditra ireo namany enina hafa.
Ny efatra nitondra antsy, ny roa nitondra basy. Lasa tamin’izany ny vola mitentina 10 tapitrisa Ar sy ny finday ary ny fitaovana elektronika rehetra tao amin’ilay fivarotana. Nitifitra olona roa ireo jiolahy raha iny saika hanenjika iny ny manodidina. Naratra ireto voatifitra ary nentina haingana any amin’ny HJRA.
Manakaiky ny fety, miseho lany ny fanafihana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Fanafihana mitam-basy izay mampihorokon-koditra ny olona tanteraka. Aiza ho aiza ilay hetsiky ny polisy?